अहिलेको टिकटक, उबेलै थियो ठिकठाक | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ १०, २०७७ शनिबार ९:२९:३ | मिलन तिमिल्सिना
‘बल्ल छोराछोरी स्कुल जान थाले, ढुक्क भयो’ उनले हत्तपत्त मोबाइल खोलिन् । हिजोसम्म छोराछोरीको अनलाइन कक्षा भएर मोबाइल छुन पाइएको थिएन । कहिलेदेखि स्कुल खुल्छ र ढुक्क हुन्छ भनेर दिन पर्खँदै थिइन् । बल्ल त्यो दिन आयो । उनी त्यसै त्यसै फुरुङ्ग भइन् ।
‘ओहो...अस्ति राखेको फोटोमा कति धेरै कमेन्ट र लाइक आइसकेको रहेछ, कसैको कमेन्टमा आफूले लाइक र थ्याङ्क्स भन्न पाएको होइन’ उनी एक्लै फत्फताइन् ।
फेसबुक हेरेर मस्किन थालेकी उनको अनुहार एकाएक बिग्रियो । ‘हैन तेरो बाउलाई त्यति पनि सुद्धि भएन है, सबैतिर मैले नै नहेरी नहुने’ भन्दै उनी किताब खोज्न थालिन् । बल्लबल्ल खाटमुनि मिल्किरहेको किताब फेला पारिन् । ‘ला लैजा’ छोरालाई किताब दिँदै भनिन्, ‘अघि दिएको ५० रुपैयाँ सबै सक्ने हैन नि, दिदी र तँलाई एकएक वटा चाउचाउ किन्नु, बाँकी १० रुपैयाँ फिर्ता ल्याउनु।’
‘फिर्ता त ल्याएको ल्यायै हो, चोकोफन किनेर खान्छु’ भन्दै छोरो किताब बोकेर कुुद्यो ।
छोराछोरीलाई बस चढाएर श्रीमान कोठामा फर्किए । श्रीमती बेडमा पल्टिएर मोबाइल खेलाउँदै थिइन् । ‘हाहा.....ए बाबा यो टिकटक हेर्नु न ओली र प्रचण्डको अर्को दोहोरी रैछ ।’
‘खै खै देखाउ त’ श्रीमानले हेरे । टिकटिकमा ओली र प्रचण्डका दुईवटा भाषण जोडेर बनाइएको छोटो भिडियो रैछ । बायाँतिर उभिएका प्रचण्ड भन्दैछन् -‘यो नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो ।’ अनि दायाँतिर उभिएका ओली भन्दैछन् -‘यो नौटंकी नै हो, नौटंकी नै हो, नौटंकी नै हो ।’
'आहा कस्तो मज्जाको दोहोरी । सँगै आमनेसामने उभिएर ओली र प्रचण्डले दोहोरी खेलेजस्तो ।'
टिकटकमा हेर्दा ओली र प्रचण्ड आमनेसामने भएर दोहोरी खेलेजस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएको विषयमा प्रचण्डले ‘यो नाटकै मात्र हो’ ‘नाटकै हो’ भनेका थिए । अनि अर्को कार्यक्रममा ओलीले अन्तर्वार्ताको विषयमा आफूलाई व्यङ्ग्य गरेको भन्दै प्रचण्डको क्यारिकेचर गरेका थिए । प्रचण्डले ‘नाटकै हो’ भनेको कुरालाई क्यारिकेचर गर्दा ‘नौटंकी नै हो’ भन्न पुगेका थिए । अनि टिकटकमा रमाइलोको लागि नाटक र नौटंकीको दोहोरी बनाएर भिडियो बनाइएको थियो । कुन प्रसङ्गमा कसले के बोलेको भन्नेसँग चासो होइन, रमाइलोको लागि मात्र हो हेर्ने त !
‘यता हेर्नु न अरु पनि रैछ रमाइलो दोहोरी - ओली र प्रचण्ड, ओली र खनाल, ओली र नेपाल....हाहा......कतिथोक भन्न जानेका हुन्, रमाइलो मात्रै गर्न जानेका सबैले’ श्रीमती उत्साहित भइन् ।
श्रीमतीको कुरा सुनेर श्रीमान जङ्गिए, ‘खुरुक्क भात पस्क छिटो, आफूलाई अफिस पुग्न ढिलो भैसकेको, आफू हुनै बाँकी छ ठिकठाक, तिमीलाई टिकटक !’
‘ढिलो भए पस्केर खानुस् न त, म अहिले खान्छु’ भन्दै उनी एकोहोरो मोबाइल हेरेर हाँस्न थालिन्, ‘आहा कस्ति नक्कली रैछे यो त....कस्तो लुगा लगाएर नाचेकी होला..।’
‘सुन्नु न बाबा, मैले पनि अस्तिताका टिकटक अकाउन्ट खोलेको थिएँ, फेरि बिर्सिसकेको छु भन्या, दिनदिनै मोबाइल चलाउन पाए पो ! छोराछोरीको अनलाइन कक्षाले मैले त मोबाइल चलाउनै पाइनँ, एउटा मोबाइल लेइदिनु न न मलाइ पनि ।’
‘अँ त्यही काम बाँकी छ...लकडाउनले कमाइ नभएर नुनतेल किन्ने पैसा कहाँबाट लेराउने भैरहेको बेला तिमीलाई मोबाइल ? परेको छैन टिकटक चलाउन’ फतफताउँदै श्रीमान कोठाभित्र पसे । हुन त घरमा बस्दा श्रीमान पनि टिकटकमै भुल्छन् । नेकपाका नेताहरुका दोहोरी र ठिटीहरुका नाच हेरेर मख्ख पर्छन् । टिकटक चलाउन थालेपछि कहिलेकाहीँ अफिस जान पनि बिर्सन्छन् ।
‘हैन यो कान्छी पनि अनलाइनमा छैन कि क्या हो.... ए रैछ रैछ’ भन्दै उनले मेसेञ्जरमा बहिनीलाई कल गरिन् ।
‘ओइ... कान्छी सुन न.... म दिउँसो तेरो कोठामा आउँछु, मलाई एउटा टिकटक बनाउन सिकाइदे है....? सुनिस्......यो वाईफाईले पनि राम्रो काम गर्दैन भन्या.....टिकटक के टिकटक.....म दिउँसो आउँछु ल.....’ मेसेन्जरको कल काटियो । उनी बेडबाट उठिन् ।
‘ए तपाईँले खाइसक्नु भएको ? भरे फर्किंदा एक बाकस चाउचाउ लेराउनुस् है, केटाकेटीलाई पैसा दिनुभन्दा यहीँबाट ब्यागमा हालेर पठाइ दिनुपर्यो’, श्रीमानलाई हेर्दै भनिन् ।
‘के बनाउने खानेकुरा ? ल भोलिदेखि तपाईँ आफैले बनाइदिनुस् न त, कसले छेकेको छ र’ श्रीमती बोलिन् ।
‘दिउँसो फुर्सद भएर हुन्छ, दिउँसो बनाएर कतिखेर लैजाने नि खाजा ? कुरा पनि सुहाउने गर्नु नि ? त्यसमाथि कसले गरोस् नानाथरी ? चाउचाउ किन्यो ब्यागमा राख्यो, कति सजिलो कति’ श्रीमती भात खान थालिन् ।
‘लौ जे गर’ भन्दै श्रीमान अफिसतिर लागे ।
‘कुलमान हिँडेपछि त हरेक दिन बत्ति जान्छ । फेरि लोडशेडिङ हैन पनि भन्छन् । बत्ति नभएपछि वाईफाई पनि चल्दैन, अब कान्छीकोमै जानुपर्यो’ भन्दै उनी उठिन् ।
आमाले सधैं मकै भुट्न नभ्याउने भएकाले धेरै दिन त त्यसै स्कुल जानु पर्दथ्यो । स्कुल पुग्दासम्म भोक लागिसक्थ्यो । बाटो छेउछाउ र स्कुल वरपर पसल हुँदैन थियो । पसल भए पनि पैसा हुँदैन थियो । अनि अहिलेजस्तो चाउचाउ, बिस्कुट, कुरकुरे खान पाइँदैन थियो । बा कहिलेकाहीँ बजार गएर फर्किंदा मात्र मिठाई र बिस्कुट चाख्न पाइन्थ्यो । चाउचाउ र कुरकुरे त परको कुरा ।
हाफ छुट्टीसम्म भोक खप्न सकिन्थ्यो । सरमिसले पढाएका कुरा अलिअलि बुझेजस्तो लाग्थ्यो । त्यसपछिको कक्षामा भने पढाएको बुझ्न त परको कुरा भोकले सरमिसले बोलेको समेत बुझिँदैनथियो । कहिले घण्टी लाग्ला र भनेर कान ठाडो हुन्थ्यो । हाई काढेर बेन्चमै निदाउन थालेपछि बल्ल छुट्टीको घण्टी लाग्थ्यो ।
छुट्टी भएर दौडिँदै घर पुग्दा ढोकामा आग्लो लागेको हुन्थ्यो । बिहान भात खाने बेला देखेको आमालाई भरे भात खाने बेला नहुँदासम्म देख्न पाइँदैन थियो । तालाले आग्लो खोलेर भित्र पस्दा कहिले बिहानको भात हुन्थ्यो, कहिले भुटेको मकै । भात मिठो भएन, मकै टोक्न सकिएन भनेर कराउनु र उफ्रनुको अर्थ थिएन । जसोतसो चित्त बुझाउनु पर्दथ्यो ।
यसै गरीगरी उनले पढाइ सकिन् । कलेज पढ्न थालेपछि विवाह भयो । अनि कलेजको भन्दा पहिले बिहेको सर्टिफिकेट निस्क्यो । छोराछोरी ठूला भए । स्कुल जान थाले । उनले स्कुल पढ्दा र छोराछोरीले स्कुल पढ्दाको बेलामा आकाश पातालको फरक आयो । उतिबेला आमालाई एकछिन फुर्सद हुँदैन थियो, अहिले आफूलाई फुर्सद नै फुर्सद । हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा फेरिए । मोबाइल आयो । मोबाइलसँगै फेसबुक, टिकटक नानाभाँती आयो ।
चाहिने कुरा पनि आयो । नचाहिने कुरा पनि आयो । तर जे भए पनि काम नहुनेलाई टाइमपास गर्ने गज्जबको मेलो मिल्यो । अरुजस्तै उनी पनि मख्ख छिन् । त्यसैले आफ्नो पालाको सबै कुरा बिर्सेर टिकटकमा भुल्ने सुरसार कस्दैछिन्।
‘कसले झण्झट गरिरहोस्, चाउचाउ नै मिठो हुन्छ नि, त्यसमाथि चाउचाउ पाएपछि तिमीहरुले अरुथोक खान्छौ नि ? हामीलाई थाहा नभएको हो र’ छोराछोरीको स्वास्थ्यबारे मतलब नै नभएकी उनले थपिन्, ‘ए नानी तेरो सानीमाले टिकटक बनाउन त सिकाइ, तर अघि राखेको टिकटक त कता हरायो हरायो भन्या, हेरिदेउ त ।’
‘नकराउनुस् तपाईँ, मान्छेलाई यहाँ पेट दुखेर खप्न भएको छैन, तपाईँलाई टिकटक’ छोरी पेट छाम्दै बेडमा पल्टिन् । उनी मोबाइल हेर्दै भान्सामा पसिन् ।
‘आहा यो सचिन भाइको बोली नै मज्जाको क्या, अर्को गीत पनि भाइरल भएछ । ’
आमाको कुरा सुनेपछि पेट दुख्यो भनेर पल्टेकी छोरी जुरुक्क उठिन्, ‘हो र ममी...., खै खै हेरौं.....। आ....मेरै मोबाइल खोल्छु......। ....ओहो यो केटीले कति राम्रोसँग डान्स गरेकी...भोलि म पनि यस्तै टिकटक बनाउँछु ।’
अन्तिम अपडेट: बैशाख १०, २०७८